Shabaab oo faah faahin ka bixiyay dagaal xoogan oo ka dhacay Muqdisho | raascasayrmedia.com
← Sawiradii Madasha shirka Beelaha Raascasayr & Laaso Surad
Inter oo reebtay Munich ,Man, United oo soo baxday →
March 16, 2011 · 9:05 pm
Shabaab oo faah faahin ka bixiyay dagaal xoogan oo ka dhacay Muqdisho
Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa faah faahin ka bixisay weeraro culus oo xalay ay ku qaadeen fariisimooyin ciidamada dowladda KMG Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho, iyagoo sheegay inay la waregeen fariisimooyin farabadan.
Kadib dagaal culus oo dhowr saacadood qaatay oo xalay gil gilay magaalada Muqdisho una dhaxeeyay Xarakada Al Shabaab, dowladda KMG, iyo AMISOM ayaa saraakiisha Xarakada Shabaab waxaa ay faah faahin ka bixiyeen dagaaladaasi.
Afhayeenka ciidamada Xarakada Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab oo maanta Warbaahinta shir jaraa’id u qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay in xalay fariisimo badan oo ku yaala Muqdisho oo ay ku suganaayeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda si saf mareen ah ay u weerareen ciidamada Shabaab.
Abuu Muscab ayaa waxaa uu tilmaamay in firiisimo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku lahaayeen deegaanadii ay weerareen gaar ahaan degmada Hodan iyo Wardhiigleey ay la wareegeen ciidamada Shabaab hub badana ay gacanta ku dhigeen sida uu hadalka u dhigay.
Afhayeenka ciidamada Shabaab waxaa uu shaaca ka qaaday in uu fashilmay duulaankii ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda KMG maalmihii u dambeeyay ay ku qaadayeen fariisimaha ciidamada Al Shabaab ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho, isagoo carabka ku dhiftay in uu bilowday duulaankii Al Shabaab ay ku qaadi lahaayeen fariisimaha AMISOM iyo kuwa dowladda KMG ay ku leeyihiin Muqdisho.
Majiraan wax war ah oo kasoo baxay Saraakiisha dowladda KMG Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo ku aadan dagaaladii cuslaa ee xalay ka dhacay Muqisho hase haatee xalay ayaa dagaal dhowr saacadood qaatay, waxaa degmooyin kala duwan oo ku yaala gobolka Banaadir uu ku dhexamray ciidamada Al Shabaab, dowladda KMG oo taageero ka haleysa AMISOM.
Hase ahaatee dagaalkii xalay Al Shabaab ay dhowrka jiho ka qaadeen ayaa waxaa ku dhintay inta la’ogyahay 10-qof oo u bandaa dad rayid ah, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 10- kale kuwaasi oo ay ku jireen caruur iyo dad da’ah oo qaarkood la gaarsiiyay Isbitaalada Magaalada Muqdisho.